စစ်မှန်သောယေရှုဘုရား၏အသင်းတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
စစ်မှန်သောယေရှုဘုရား၏အသင်းတော် (True Jesus Church)သည် သီးခြားရပ်တည်သော ခရစ်ယာန်ကျောင်းတော်ဖြစ်ပြီး (တရုတ်)နိုင်ငံ ပီကင်းမြို့တွင် ၁၉၁၇-ခုနှစ်၌ စတင်တည်ထောင်သည်။ ယခုလက်ရှိတွင် နိုင်ငံပေါင်း (၄၅)နိုင်ငံ၌ အသင်းသား ၁.၅-သန်းခန့် ရှိသည်။ ဤကျောင်းတော်သည် ၂၀-ရာစု အစောပိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာသော ခရစ်ယာန်ဘာသာ ပန်တီကိုစတယ်ကျောင်းခွဲ (Pentecostal branch of Christianity) အောက်တွင် ရှိသည်။ ခရစ်စမတ်နှင့် အီစတာပွဲတော်များကို ကျင်းပလေ့မရှိပေ။ ကျောင်းတော်သည် ယေရှုသခင် ဒုတိယအကြိမ် ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်မီ နိုင်ငံအသီးသီးသို့ တရားတော်ကို ဟောကြားဖြန့်ဖြူးရန် ရည်ရွယ်သည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဝတ်ပြုရာကျောင်းတော်များသည် ရန်ကုန် (မြန်မာ)။ ယခုအခါ တောင်ဖီလာ၊ ပျဉ်ထောင်ဦး၊ ပြည်တော်သာ၊ စက္ကမရီ၊ လမ်ဇန်၊ စံမြို့၊ လက်ပံချောင်း၊ စော်ဘွားရေဆင်း၊ တီးတိန်မြို့၊ ဖလမ်း၊ နတ်ကြီးကုန်းနှင့် ရန်ကုန် ရွှေပေါက္ကံ တို့တွင်တည်ရှိသည်။
၁ အဓိကဟောကြားချက် (၁၀)ချက်
၁.၁ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်
၂ ရည်ညှန်းချက်များ and Further Reading
စစ်မှန်သောယေရှုဘုရား၏အသင်းတော်၏ အဓိကဟောကြားချက် (၁၀)ချက်မှာ-
"နှုတ်ဖြင့်ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈယ်ခြင်းဖြင့် သက်သေခံသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား ခမ်းခမ်းနားနား ကြိုဆိုခြင်းသည် ကောင်းကင်ဘုံနိုင်ငံတော်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့ပိုင် အမွေအနှစ်များအား စောင့်ရှောက်တော်မူခြင်း၏ ကတိဝန်ခံချက်ပင် ဖြစ်သည်။" 
"နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကျင်းပခြင်းသည် ဘုရားသခင်က အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်စေခြင်းနှင့် အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည့် ခရစ်ယာန်ဓမ္မမင်္ဂလာ ဖြစ်သည်။ မြစ်၊ ပင်လယ်၊ ရေထွက်စမ်းချောင်း စသည်တို့ကဲ့သို့ စီးဆင်းနေသော ရေပြင်တွင် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပြုခြင်းကို ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပြုခြင်းကိုခံယူပြီး သခင်ယေရှုခရစ်၏ အမည်နာမတော်အားဖြင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အဖြစ် ရောက်ရှိ ခံယူကျင့်သုံးလာသည်။။ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘာသာအား ကြိုဆိုလက်ခံသူသည် သူ့မျက်နှာကို အောက်ဘက်သို့မူစေပြီး သူ့ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံးကို ရေအောက်သို့ စုန်းစုန်းမြုပ်အောင် နှစ်ထားရမည်။" 
"ခြေဆေးမင်္ဂလာပြုခြင်းသည် တစ်စုံတစ်ယောက်အား ယေရှုဘုရားသခင်နှင့် ထပ်တူ စွန့်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်စွမ်းသည်။ ဤမင်္ဂလာပြုခြင်း သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အား မေတ္တာ၊ နှိမ့်ချခြင်း၊ သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်လာစေရန် နှိုးဆော်ခြင်းဖြင့်လည်း အစေခံရာရောက်သည်။ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘာသာကို တခမ်းတနား ကြိုဆိုလက်ခံထားသူတိုင်းသည် ယေရှုခရစ်တော်၏ အမည်နာမတော်ကို ခံယူပြီး သူတို့၏ ခြေထောက်များကို ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး ဖြစ်သည်။ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်အချင်းချင်း ခြေထောက်များ ဆေးကြော သန့်စင်ခြင်းကို လျှော်ကန်သင့်မြတ်သော မည်သည့်အချိန်ကာလတွင်မဆို လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ကြရသည်။" 
ပွဲတော်မင်္ဂလာ သည် သခင်ယေရှု၏ ကားစင်၌ အသက်အသေခံတော်မှုခြင်းကို အထိမ်းအမှတ်ပွဲအဖြစ် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော် အလိုအရ ကျင်းပသည်။ သခင်ယေရှု၏ အသား၊ အသွေးကို စားယူ သောက်သုံးပြီး ကိုယ်တော်နှင့် အတူရှိနေခြင်းဖြစ်၍ နောက်ဆုံးသော ရှင်သန်ထမြောက်သည့်နေ့တွင် ထာဝရအသက်ကို ရကြမည်။ ထိုရည်ညွှန်းကျင်းပမှုကို တတ်နိုင်သမျှ မပြတ်ပြုအပ်သည်။ တစေးမရောသော ပေါင်မုန့်နှင့် စပျစ်ရည်ကိုသာ သုံးစွဲကျင်းပလေ့ရှိသည်။ 
"သီတင်းပတ်တစ်ပတ်၏ သတ္တမမြောက်နေ့ (စနေနေ့) ဖြစ်သော ဥပုသ်နေ့သည် ထာဝရဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးခြင်းနှင့် မွန်မြတ်သန့်စင်စေခြင်းတို့ကို ခံယူရရှိသည့် မြင့်မြတ်သောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်သည်။ ထာဝရခိုနားရမည့်ဘဝကို ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းများ ထွက်ပေါ် လာခြင်းနှင့်အတူ ထာ၀ရဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့၏ အထိမ်းအမှတ်ပွဲအဖြစ် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော် အလိုအရ ကျင်းပသည့်နေ့ ဖြစ်သည်။" 
"ယေရှုသည် ကျူးလွန်သူတို့အကယ်အပြစ်ကြောင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ အသေခံပြီး တတိယမြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်ပြီး ကောင်းကင်ကို တက်ခဲ့သည်။ ယေရှုသည် လူတို့၏ ကယ်တင်ရှင်သာလျှင်ဖြစ်၊ ကောင်းကင်နှင့် ကမ္ဘာ့၏ ဖန်ဆင်းရှင် ဖြစ်ပြီး ဘုရားအမှန်သာလျှင်ဖြစ်သည်။" 
"ဓမ္မသစ်ကျမ်းနှင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပါတည့် ဘုရားမှုတ်သွင်းမူသော ကျမ်းတရားဓမ္မကျမ်းစာသည် ခရစ်ယာန်လူနေမှုအဆင့်အတန်းဖြစ်သည်။" 
"ထာဝရဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ပြုစေသည်။ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘာသာကို ယုံကြည်သူများ သည် မြင့်မြတ်ခြင်းရှိစေရန်၊ ထာဝရဘုရားသခင်အား လေးစားဂုဏ်ပြုရန်နှင့် နှိမ်ချခြင်းကို ချစ်မြတ်နိုးရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား လုံးဝ မှီခိုအားထား ယုံကြည်ရမည်။" 
ရှင်သန်မြောက်တော်မူမည့်ကာလ မြင့်ြမတ်သော ဝိဉာဉ်တော်အားဖြင့် သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် ဖြစ်တည်တော်မူသော ကျောင်းတော်သည် ဟောကြားတော်မူထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည် တည်စေမည့်ကျောင်းတော် ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှု၏ ဒုတိယတဖန် ကြွလာတော်မူခြင်းသည် တရားစီရင်ရန်အလို့ငှာ ကောင်းကင်ဘုံမှ ကမ္ဘာမြေသို့ ကြွချီရာ နောက်ဆုံးသောနေ့တွင် ဖြစ်လိမ့်မည်။ တရားစောင့်သူတို့သည် ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကိုရမည်။ ထို့အတူ အပြစ်ရထိုက်သူတို့သည်လည်း ထာဝရ ပျက်စီးခြင်း တိုင်မည်။ 
ရည်ညှန်းချက်များ and Further Readingပြင်ဆင်
↑ ရောမဩဝါဒစာ။ ၈:၁၆ Archived 24 September 2011 at the Wayback Machine.; ဧဖက်ဩဝါဒစာ။ ၁:၁၃-၁၄ Archived 19 February 2010 at the Wayback Machine.
↑ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။ ၃:၅[လင့်ခ်သေ]; ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ ၃:၁၆[လင့်ခ်သေ]; တမန်တော်ဝတ္ထု။ ၂:၃-၈[လင့်ခ်သေ], ၁ဝ:၄၈[လင့်ခ်သေ]
↑ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။ ၁၃:၁-၇[လင့်ခ်သေ]
↑ ကောရိန္သုဩဝါဒစာပဌမစောင်။ ၁၀:၁၇[လင့်ခ်သေ], ၁၁:၂၆[လင့်ခ်သေ]; ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။ ၆:၅၃[လင့်ခ်သေ]
↑ ဟေဗြဲဩဝါဒစာ။ ၄:၉-၁၁[လင့်ခ်သေ]
↑ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။ ၃:၁၆[လင့်ခ်သေ]; ကောရိန္သုဩဝါဒစာပဌမစောင်။ ၁၅:၃-၄ Archived 25 September 2011 at the Wayback Machine.; တမန်တော်ဝတ္ထု။ ၄:၁၂[လင့်ခ်သေ]
↑ တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယစောင် ၃:၁၆[လင့်ခ်သေ]
↑ ဧဖက်ဩဝါဒစာ။ ၂:၈[လင့်ခ်သေ]
↑ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ ၂၅:၃၁-၃၄[လင့်ခ်သေ]; သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာပဋ္ဌမစောင် ၄:၁၆-၁၇ Archived 25 September 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စစ်မှန်သောယေရှုဘုရား၏အသင်းတော်&oldid=700453" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။